IXiaomi Mi 9S (5G) iqinisekisiwe yi-TENAA kwaye izakuqalisa kungekudala | I-Androidsis
IXiaomi Mi 9S (5G) iqinisekisiwe yi-TENAA kwaye izakuqalisa kungekudala
Kuninzi esele kuthethiwe malunga nokufika kuka Xiaomi Mi 9 ngokudityaniswa kwe5G. Kubonakala ngathi inkampani sele inayo kuphuhliso okanye, endaweni yoko, sele ilungele ukwaziswa, kwaye eyokugqibela ibonakala iyeyona ithembekileyo kuba i-terminal isandula ukuvunywa yi-3C yase China kwaye, ngeli xesha, nguTENAA, omnye umlawuli waseTshayina.
UXiaomi ugcina iliso kwinethiwekhi ze5G, Kwaye ke ifuna ukuba ngomnye wabavelisi be-smartphone abanobukho obukhulu kweli candelo. Kungenxa yoko le nto isebenza kuphehlelelo lwee-mobiles zexesha elizayo kunye nenkxaso yokunxibelelana, kwaye nangona ukhuseleko lwe5G lusanda ngokuthe chu kumazwe ambalwa nakwizixeko, lithembisa okuninzi kwikamva, apho liya kuba nomtsalane ngakumbi kunangoku, xa kungenakwenzeka ukufumana i-terminal ye-5G.
I-Xiaomi Mi 9 5G-ebizwa ngokuba yi-Mi 9S ngamanye ama-tipsters-incinci. Ngokweenkcukacha, yi-8.95 mm ubukhulu, xa kuthelekiswa ne-7.6 mm yemodeli yoqobo. Oku kunokuba njalo ukulungiselela ibhetri enkulu ye-4.000 mAh (3,300 mAh yefowuni yangoku) ethe yavuza kuyo. Ngokwengcaciso enikiweyo, inentlawulo ekhawulezileyo yee-watts ezingama-45, ezimele ukunyuka okubonakalayo, xa kuthelekiswa nee-watts ezingama-27 ezixhaswa yi-Mi 9.
Inombolo yefowuni yeXiaomi Mi9 5G yemodeli M1908F1XE iye yaqinisekiswa kwi-TENAA.
Iya kuxhasa ukutshaja kwe-45W. pic.twitter.com/7Jra7dtsHr
- Xiaomishka (@xiaomishka) Agasti 9, 2019
Ngokwedatha yeTENAA, ubungakanani bekhusi bugcinwa malunga nee-intshi ezi-6.39 zidayagon, kodwa amahemuhemu abanga ukuba uhlaziyo olongezelelekileyo luyenzeka, njengesisombululo se-QuadHD +, esiza kuthatha indawo ye-FullHD + yephaneli yemodeli esemgangathweni.
Kwakhona, IXiaomi kulindeleke ukuba ihlaziye i-chipset iye kwi I-Snapdragon 855 + kwaye yongeza i-OIS kwikhamera ephambili ngasemva. Kuyafana naye Mi Hlanganisa 3 5GIya kuba ne-SIM khadi yesibini (kunye nokulinda okubini).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Mi 9S (5G) iqinisekisiwe yi-TENAA kwaye izakuqalisa kungekudala
IHuawei Mate 30 iza kufika ngoSeptemba iprosesa entsha
IPUBG Mobile Lite sele isungulwe kumazwe aliqela